Ifanitshala yefanitshala, ukuqinisekisa umgangatho
Umbhede wesofa, isofa, ukuphinda usebenze, isofa secandelo, umatrasi kunye nesakhelo sebhedi kunye nesimanje, IYurophu, Isitayile seChesterfield
Ngaphezulu 35 Iminyaka ye-ODM ethembekileyo kunye namava e-OEM
Ifanitshala yeBaothian Co, Ltd.
Ifanitshala yeBaothian Co., Ltd. yasungulwa ngaphakathi 1985 kwaye ibekwe eShunde, Isixeko saseFoshan, Iphondo laseGuangdong. Sigubungela indawo 50,000 iimitha zesikwere kunye nkulu ebhalisiweyo malunga 2 isigidi seDola.
Umenzi weebhedi zeesofa zeBaotian ukhethekile ekuveliseni isofa, ibhedi yesofa, ukuphinda umbane, umatrasi kunye nebhedi. Siyasebenzisana neprojekthi yehotele, zizonke, kunye nabathengisi.
Ukujongana nenani elikhulu kangaka lefanitshala, Zininzi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo. Ngokuqinisekileyo, Iipaneli zebhedi, iintlobo zininzi njengeebhedi ukusuka kubungakanani ukuya kwizinto eziphathekayo. Yiyo loo nto, ukuba uziva umathidala okanye kunzima kuwe ukuba uthathe isigqibo sokuba yeyiphi ekufuneka ibe lukhetho lokuqala njani, uthini malunga nokufunda le bhedi yokumkanikazi iphakanyisiwe yibhodi yentloko?
Ubume bokubuyela umva kunye nogwebu oluphezulu olwenza ukuba uzive uthambile kwaye uxhase nako. Ilaphu elimdaka ngebala le-velvet liya kuba lula ukucoca. Uyilo lweewharetshi ezilungelelanisiweyo kufuneka zihambelane neetafile zokutyela ezahlukeneyo. Isiseko sesihlalo seenkuni esomeleleyo esenza ukuba ubomi benkonzo bube ngaphezulu kunye noyilo oluhlanganisiweyo.
Isitayile sesi-L esenziwe ngempahla yendlu yakhe kwigumbi lokuhlala sofa. Umdiliya omfusa, zothando nenhle, Umdlalo ogqibeleleyo nokonwatyelwa kukungcamla ingca yeediliya. Iintloko ezihlengahlengiswayo zinika imfuno yakho, zisuse okanye uzibambe naphina xa ufuna. Isakhelo esineentsimbi kunye nentwasahlobo epakishwe kwisitovu kwindawo yendawo yokuhlala izisa ukhuseleko kunye nokuziva kuhleli kamnandi kunye.
Isofa yangoku yegumbi lokuhlala elinombala omfusa - Ubuvila obuyimfihlakalo kodwa obuthandekayo. Iinyawo zomthi eziqinileyo zinika inkxaso enamandla. Imvakalelo ethuthuzelayo ifumana indlela yokuhlala kwisofa enjalo usebenzisa intwasahlobo epokothwayo & isiponji esixineneyo.
Ngokuphuculwa komatrasi, umatrasi omtsha osandul 'ukuvela uvela, ehamba njengenketho kwabo banethemba lokuba nazo zombini iinkumbulo amagwebu kunye noomatrasi bangaphakathi. Ngokufanelekileyo umatrasi we-hybrid sisiseko sokungena ngaphakathi esilayishwe nge-foam ephezulu kakhulu. I-Hybrid lukhetho olufanelekileyo kubantu abafuna ukonwabela ukudityaniswa kwenkxaso yasentwasahlobo kodwa banyanzelise umgangatho wenkohliso yememori.
Umbhede wokugcina omnyama wesikhumba ulungile ukuba ukhethwe kwigumbi lokulala elincinci kuba liya kuhlala likhulisa ngokubonakalayo kwaye longeza ukukhanya kwenkanuko. Omnyama udibanisa ubuhle kunye nesitayile kunye nebhodi eyomeleleyo ye-quilting kunye nayo yonke efihla iibhokisi zokugcina.
Uyilo lweChesterfield Uyilo oluMnyama lweCawa, Kule mihla, Icocekile, kunye neMfashoni. Elinye iqhekeza elikhulu lesitali sepokotho yendawo yokuhlala ikhululekile kwaye ithambile. Uyilo olushukumisekayo kulula ukucoceka kwaye lucocekile. Amaqhosha esinyithi egolide kunye nemilenze yensimbi engenasici yenza uyilo lwesofa lube ntle ngakumbi.
3 indawo yokuhlala ilaphu isofa, kunye neBelgium Brand Mechanism Bed Bed. Isiseko esomeleleyo sombhobho wesinyithi, nge-mattress yasentwasahlobo yepokotho: 143*195*12i-CM. Inyathelo elinye lokuvula ibhedi yesofa kulunge ngakumbi kwaye kulula ukuphatha.
Ifanitshala yehotele isitayile samanje isitokhwe esiqhelekileyo siguqukayo siti couchion sofa bed.Sofa ebhedi usebenzisa phezulu 500 Uhlobo lwaseMelika. Indlela yokucwangcisa imibhobho yesikwere inika inkxaso eyomeleleyo yokuhlangabezana neemfuno zehotele ezahlukeneyo kunye neentsapho. Ubungakanani bomgangatho wovavanyo lweplastikhi yasentwasahlobo: 90/130*185*12i-CM.
Isofa yekona yangoku iya isanda ngenxa yobungakanani bayo obunokuhlengahlengiswa kunye neekona ezifudumeleyo abazincamathelayo. Ukuba ujonga into ehlasela ibhalansi elungileyo phakathi kwechaise kunye nesofa yekona, qwalasela ifanitshala yethu yaseBaotian. Le sofa ibanzi inendawo eyaneleyo yalo lonke usapho ngaphandle kokuzibaxa izinto. Izinto ezenziwe ngombala ongwevu zongeza umnxeba owongezelelekileyo kuyilo. Zininzi ezinye ezikhoyo ezifana nevelvet ukuba awuyithandi ilaphu ke uneevenkile ezijikeleze ...